Osmos Demo Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Osmos Demo
Osmos Demo APK ကို
တစ်နှစ်တာဂိမ်းအဖြစ် Named, Osmos ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးနှင့်ဂန္ em တက်ကိုစား, ရူပဗေဒ၏စိတ်ကူးပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦး Galactic mote ၏ Darwinian ကမ္ဘာကြီးကိုရိုက်ထည့်ပါ။ , ဆက်လက်ရှင်သန်သေးငယ်သက်ရှိစုပ်ယူကြီးထွား-ဒါပေမယ့်ပိုကြီးတဲ့သားကောင်တွေကိုသတိနှင့်ကြဉ်ရှောင်ပါ! ဆုမျိုးစုံ "တစ်နှစ်တာ၏ဂိမ်း" ၏ဆုရှင်, Osmos ထူးခြားတဲ့ရူပဗေဒ-based ကစား, ကြယ်ဂရပ်ဖစ်များနှင့်ပတ်ဝန်းကျင် electronica တစ်ညှို့တေးသံပါရှိပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့အသင့်ဖြစ်ပြီလား?
"ဒီအဆုံးစွန်ပတ်ဝန်းကျင်အတွေ့အကြုံကို" - Gizmodo
"အပြင်သံသယ, ပါရမီ၏အလုပ်" - GameAndPlayer.net
မှတ်ချက်: ဒီတစ်ခုတည်းဗားရှင်း Tablet နဲ့ဖုန်းတွေနှစ်ဦးစလုံးအတှကျအ optimized ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးသင့်ရဲ့ Android Device များပေါ်တွင်ခံစားပါ။ (multitouch နှင့် 2.2 သို့မဟုတ်မြင့်မားသောလိုအပ်သည်။ ပိုပြီးအချက်အလက်များအတွက် http://www.hemispheregames.com/faq-android/#tech_devices သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ)
သငျသညျသေးငယ် motes စုပ်ယူသဖြင့်ကြီးထွားရမယ်, ဒါပေမယ့်သင်ကကျုံ့စေ, သင်နောက်ကွယ်မှကိစ္စထုတ်ရန်ရမယ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်မောင်းနှင်ရန်။ ဤသိမ်မွေ့ချိန်ခွင်လျှာ မှစ. Osmos, ရေပေါ်ကစားကွင်းမှတဆင့်ယှဉ်ပြိုင် Petri ဟင်းလျာများ, နက်ရှိုင်းသောနေရောင်ခြည်စနစ်များနှင့်ထို့ထက် ပို. ကစားသမားစေပါတယ်။
သငျသညျ Single-ဆဲလ်သက်ရှိနှင့်အတူအကြောင်းကို mucking likes သူကိုနှလုံးမှာကလေးတစ်ဦး, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးရူပဗေဒဘွဲ့နဲ့မဟာဗျူဟာအနေဖြင့်ဖြစ်စေ, သငျသညျ Osmos ကိုချစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဆုချီးမြှင့် / အသိအမှတ်ပြုမှု:
* Editor ကိုဖွင့်ရွေးချယ်မှု - Google ကက Wired, Macworld, IGN, GameTunnel နှင့်ထို့ထက် ပို. ...
* "တစ်နှစ်တာ၏အိုင်ပက်ဂိမ်း" နှင့် Apple ကဒီဇိုင်းဆုဆုရှင်
* #1 ထိပ်တန်းမိုဘိုင်းဂိမ်း - IGN
တစ်နှစ်တာ၏ * ဂိမ်း - ဒစ်ဂျစ်တယ်တေးဂီတကိုဖန်တီးပါ
Show ကိုအတွက် * အကောင်းဆုံး - IndieCade
* Vision ၏ဆုချီးမြှင့် +4IGF လျာထားခံရ - လွတ်လပ်သောအားကစားပြိုင်ပွဲပွဲတော်
* အအေးဆုံးလေထု - IGN
* အကောင်းဆုံးအသံကြော - IGN
* အများစုမှာဆန်းသစ်သောဂိမ်း - အကောင်းဆုံး App ကိုအစဉ်အဆက်ဆုပေးပွဲ, Pocket ဂိမ်းကစားသူ
Kotaku, PAX, TouchArcade, iLounge, APPera, IFC ကများနှင့်ထို့ထက် ပို. အပါအဝင် * အတော်များများကထိပ်တန်းစာရင်း ...
* ဒီသရုပ်ပြဂိမ်းရဲ့ပထမဦးဆုံး 8 အဆင့်ဆင့်ပါဝင်သည်။ (အဆိုပါအပြည့်အဝဗားရှင်း 72 ကွဲပြားကမ္ဘာ spanning 8 အဆင့်ဆင့်လည်းပါဝင်သည်။ Ambient, Antimatter, နေရောင်ခြည်, Sentient, Repulsor, အကျပ်အတည်းကို, အတိုင် Chaos နှင့် ရှိ. နေ)
Loscil, ဓာတ်ငွေ့, အမြင့်ကောင်းကင်, ဇီ, ယူလနျြ Neto နှင့်ထို့ထက် ပို. အားဖြင့် * ဆုချီးမြှင့်-အနိုင်ရအီလက်ထရောနစ်တေးသံ။
* Seamlesss multitouch ထိန်းချုပ်မှု: ပွတ်ဆွဲ, အချိန်အတိုင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်ရန်မှဘယ်နေရာမှာမဆိုထိပုတ်ပါ, ချဲ့ဖို့ pinch မှ ...
* အဆုံးမဲ့ပြန်ကန်တန်ဖိုးကို: Arcade mode မှာမဆိုအဆင့်ကျပန်းဗားရှင်းကစား။ (အပြည့်အဝဗားရှင်းသာ။ )
* အချိန်-warping: ခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့ပြိုင်ဘက်ထက်မသာလွန်ဖို့အချိန်ရဲ့စီးဆင်းမှုကိုနှေးကွေး; စိန်ခေါ်ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ကအရှိန်မြှင့်။
4 /4★, ဖူးသူဖြစ်ရမည် - "ဒီဂိမ်းဒီဇိုင်းကိုစဉ်းစားဟန်နှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာ ... အသစ်အဆင့်ကိုအဆောက်အဦများအပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသော iPad အတွက် Osmos အားဖြင့်လွှမ်းမိုးထက်ပိုဖြစ်ကြ၏, နှင့်ပုံရိပ်ယောင်များရင်သပ်ရှုမောဖွယ်မရှိသေးပါရိုးရှင်းတဲ့များမှာ ... သင်ကပဲအတော်လေးအခြားအတှေ့အကွုံတှေ့ရလိမျ့မညျမဟု ကတူ။ "- ဆလိုက် Play ရန်
"အတွေ့အကြုံကစုပ်ယူ, အဆင်းလှသော။ " - IGN
5 /5ကြယ် Macworld Editor ကိုဖွင့်ရွေးချယ်မှု★ - "ကျနော်တို့ဒီနှစ်ယခုအချိန်အထိကစားဖူးတဲ့အကောင်းဆုံးဂိမ်းတစ်ခုမှာ။ တစ်ခုကရှင်းရှင်းဣနြေ္ဒ, သေး fiendishly ရှုပ်ထွေးဂိမ်း ... "
-MTV ကစားသူအများအပြား "Osmos ... တစ်ဦးမဖြစ်မနေ-ကစားဖြစ်ပါတယ်"
5 /5ကြယ်များ - "။ Osmos သင်ဂိမ်းများကိုစဉ်းစားလမ်းနှင့်သင်သည်အဘယ်သို့သူတို့ထံမှမျှော်လင့်ထားကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်ဟုတစ်ဦးအကြွင်းမဲ့အာဏာမဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည်" -AppAdvice
"ချက်လိမ္မာပါးနပ်" -Co ဒီဇိုင်း
Osmoting မင်္ဂလာ! 🙂
24.32 ကို MB
hemisphere အားကစားပြိုင်ပွဲ Inc မှ
အကောင်းဆုံးအချိန် Killers ...